Microfleece Jacket,-Zip Pullover, Ezemidlalo Jacket - Dongfang Ukwaluka
Polar uboya jacket-DFP-027
Uboya MICROPOLAR jacket DF19-115A
Polar uboya jacket-DFP-019
Jacket waterproof DFCF-004
Ijezi nobumbene uboya DFC-012
Ijezi nobumbene uboya DFC-009
Jiaxing Dongfang Ukwaluka Dress Co., Ltd, eyasungulwa ngo-1980, iyinhlangano ibhizinisi ukuthekelisa ngamakhasimende owaziwa zokuhlanganisa design tembatfo, ipuleti ukwenza, ukukhiqizwa egcizelele futhi yokuthengisa.
Inkampani Itholakala Ikhaya ka Usilika e China e Jiaxing Idolobha, Isifundazwe Zhejiang, nge zokuthutha elula, imvelo aphakeme nezindawo ezinhle. Kuyinto ngasentshonalanga onguthelawayeka yesifundazwe 07 eSifundazweni Zhejiang, futhi eduze Zhajiasu Expressway.
Le nkampani ine self-ukwesekwa kanye nokuthekelisa namazwe angaphandle amalungelo, esiza ngenkuthalo ukwandisa emakethe ekhaya aphesheya. Le nkampani ine inhlangano umsindo, ukuphathwa zifane, namandla aqinile lobuchwepheshe kanye imishini yobuchwepheshe, isebenzisa eziphambili ingubo CAD design and layout uhlelo. Thina ikakhulu ongalungisa oda namanye amazwe, brand izingubo OEM ukucutshungulwa, brand ukubambisana kanye nezinye izinsizakalo, futhi ugxile ezemidlalo ongaphandle kanye izingubo abayitoho.
Sinethemba sokukhiqiza ezinhle izinga inkonzo futhi okwakha, esiqinile nesayensi management system, okuyinto ngempumelelo iqinisekisa futhi uthembisa izinga lenkonzo yenkampani.
Bonke abasebenzi e Jiaxing Dongfang Ukwaluka Dress Co., Ltd sibamukele ngemfudumalo wonke amakhasimende amasha namadala ekhaya aphesheya ukuvakashela ubuze.
Winter Mens Softshell Boned Fleece Jacket , ijezi Fleece Jacket , Soft Shell Nge Sherpa Fleece Jacket , ijezi -Knit Fleece , sweaters Abesilisa Fleece , ijezi sezinto Fleece Jacket ,